LOVE ISLAND တွင်သူ MIKE THALASSITIS အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည် - သတင်း
မတ်ေတာသကျွန်းရဲ့သူ Mike Thalassitis အသက် 26 နှစ်သေပြီ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းရဲ့သူ Mike Thalassitis သည်သူ၏ဇာတိမြို့အနီးယနေ့သေပြီရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Love Islander သည်သူ၏ဇာတိမြို့ Essex ရှိတောအုပ်တစ်ခုတွင်ဖြတ်သန်းသွားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Mike သည်တတိယမြောက် Love Island နှင့်ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူလည်းတစ်ဝက်လိုလားသူဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ မူလကဆိုက်ပရပ်စ်မှသူသည် St Albans နှင့် Chelmsford တို့အပါအ ၀ င်အသင်းများစွာအတွက်ကစားခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင် Welling United အသင်းသို့လက်မှတ်ထိုးထားသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကျွန်းသူ Mike သည်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်းသင်၏စောင့်ရှောက်မှုမည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ ငယ်ရွယ်သူတစ် ဦး အတွက်၎င်းသည်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည် #mikethalassitis
- တွမ် (@hurdlermiller) မတ်လ 16, 2019
Mike Thalassitis ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာကိုကြားရတော့လုံးဝတုန်လှုပ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများသည်သူ့မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ဒီဟာကတကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အပတ်ပါ။ ?
- လူစီဂျုံးစ် (@ByLucyJones) မတ်လ 16, 2019
ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများထွက်ပေါ်လာချိန်မှ စ၍ Mike ကိုသိသောကျော်ကြားသူများ၏အခွန်များ
@MikeThalassitis အလွန်ထိတ်လန့်အတွက်, ထိုကဲ့သို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့ Block R.I.P ကြီးမားသောလူကို?
- Joshua Ritchie (@ritchie_joshua) မတ်လ 16, 2019
သူ့နာမည်သူ Mike Thalassitis ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးအားလုံးသည်သူ၏နာမည်ရင်းကိုမသုံးဝံ့ပါ။ ဒါအရမ်းဆိုးတယ် ငါထိတ်လန့်မိပါတယ်။ သင်အလွန်အမင်းလွဲချော်ခံရမည့်သူ Mike ။ ငါ့နှလုံးသားသည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဖြစ်သည် ငါပြီးပြည့်စုံသောထိတ်လန့် I’m အတွက်ပေါ့
- Olivia Bowen Buckland (@OliviaDBuck) မတ်လ 16, 2019
အခြားသူများကသူ၏လတ်တလောပို့စ်များကိုအောက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Rest ရေးသားခြင်း, အခွန်ဆက်ဆပ်ရန်သူ Mike ရဲ့ Instagram အကောင့်ကိုယူ။
သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကိုငွေမထည့်ချင်ဘူးလား၊ ??? WOW ဒီတော့ငါ£ 500,00 CASH ဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကွာပေးခြင်း! ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်လ ၂ လအတွက်ငှားရမ်းခပေးမလား။ ။ ဒီအံ့သြဖွယ်ဆုကိုပေးဖို့ @Adam_Deering နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာ! နွေရာသီအတွက်အချိန်မီသင်လုပ်နိုင်သမျှသောကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ။ အောက်ပါအတိုင်း DO အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းအတွက်။ ၁။ လိုက်နာပါ @Adam_Deering S ၂ ။ ၃။ အောက်ပါအတိုင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ @Adam_Deering? အောင်မြင်သူကိုသောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၉ ရက်ကံကောင်းပါစေ။ ။ T & C အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ www.facebook.com/AdamDeeringIVA/ သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
မျှဝေသည် သူ Mike Thalassitis (@mike_thala) ၂၀၁၁ မတ်လ ၅ ရက်၊ ည ၁၀း၅၀ မိနစ် PST တွင်
သူသည်မကြာသေးမီကသူ၏အဖွားသေဆုံးခြင်းကိုဝမ်းနည်းနေကြောင်းသတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေသည်။ ဒန်ဝူတန်က The Sun ၏အမှုဆောင်အယ်ဒီတာကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - သူမသည်အသက် ၉၄ နှစ်ရှိပြီးအချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်သူလိုအပ်သောကြောင့်သူနှင့်အတူနေထိုင်ရန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာသေချာစေပြီးသူ့ဆိုင်ဖွင့်တာကိုစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ သူ၏အနာဂါတ်အတွက်များစွာသိုလှောင်ထားနိုင်သည့်အရာမှာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပညာမဲ့ရာရောက်သည်။
သူ Mike Thalassitis သွားတာကိုကြားရလို့စိတ်ပျက်သွားတယ်။ သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ဘ ၀ ကိုရက်စက်စွာဖြုန်းတီးနေတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ကသူ Mike ကိုသူမ Muggy ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ သူဟာသူ့ရဲ့ Nan ဆုံးရှုံးမှုကိုဝမ်းနည်းနေပါတယ် pic.twitter.com/SAoboDQl3D
- Dan Wootton (@danwootton) မတ်လ 16, 2019
Mike သည် TOWIE ကြယ်ပွင့် Megan McKenna နှင့်အပြင်းအထန်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကပိုရအဖြစ်ကျနော်တို့ပုံပြင်ကို update ပါလိမ့်မယ်။